Home Ulo oru Europe Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara aha; "Giraffro". Anyị Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ na Akwụkwọ akụkọ na-enweghị isi Ihe eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nchoputa ahu bu ihe omuma nke Early Life Story tupu amara, ihe omuma nke onwe ya, ndu ndu, ndu ezinulo na ihe omuma ndi ozo banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọdịdị anya ya na ikike dị ukwuu mana ole na ole tụlere akụkọ Marouane Fellaini nke bụ ihe na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Ndụ mbido
A mụrụ Marouane Fellaini-Bakkioui na 22nd ụbọchị nke ọnwa 1987 na Etterbeek, Belgium. Ọ bụ Sagittarius site na ịmụ nwa.
A mụrụ ya na nne ya, Hafida Fellaini na nna, Abdellatif Fellaini (onye na-eche nche na onye na-anya ụgbọ ala). Ndị nne na nna abụọ bụ ndị si mba Tangier obodo ahụ. Ha kwagara Brussels iji nweta ụmụ ha na ịchọ ndụ ka mma.
E zitere Fellaini na Brussels ya na ejima ya aha ya bụ Mansour Fellaini (atụla anya na ọ bụ ejima).
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Malite Ọrụ
Ịhụnanya mbụ nke Fellaini bụ usoro ihe omume. Ọ malitere dị ka onye na-agba ọsọ 10,000. Nke a ka o jikọtara ya na football nke ọ malitere mgbe ọ dị afọ 8 maka ụlọ akwụkwọ nkụzi Anderlecht. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ ga-agba ọsọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe ụmụ klas ya ga-eji bọs ma ọ bụ ụgbọ ala.
Otú ọ dị, nna Fellaini bụ Abdellatif, onye bụ ọkachamara na-eduzi onwe ya, na-eduzi nwa ya iji nakweere football na ịhapụ ịga ogologo oge. Ọ na-erubere nna ya isi ma na-ekwe nkwa ịkwado bọọlụ.
N'oge mbụ ya na Anderlecht's Academy, o meriri ihe mgbaru ọsọ 26 na nke abụọ ya emeri 37. Ọ nọ na mahadum Anderlecht ruo afọ 10 tupu ya abanye na Mons, n'ihi na nna ya na-arụ ọrụ ọhụrụ n'obodo.
Mgbe ọ dị afọ 17, ọ bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na Standard Liège. N'ebe ahụ, a maara ya maka ike ya na ume ya, nke mere ya otu n'ime ndị na-agbanye ọgba aghara kasị mma na Belgian First Division. Omume ya mere ka ọ merie Ebony Shoe na 2008, onyinye e nyere onye ọkpụkpọ kacha mma nke oge Afrika.
Mgbe ọ jụchara ọganihu Manchester United, Real Madrid na Bayern Munich, Fellaini banyere Everton na September 2008. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Obu ya
Fans ya na-ebu nnukwu ntigro Afro iji gosipụta mpako ha maka onye isi ha, bụ Fellaini.
A na-eji aka aka kacha mma edozi Fellaini maka ụghalaahịa dị ka a na-ahụ n'okpuru ebe a.
Marouane Fellaini Afro Wig bụ onye kacha mma n'obodo
Wig nke Fellaini abụwo ihe na-akpali mmasị n'etiti ịntanetị ebe ọ bụ na ọ malitere ịmalite. Foto dị ka nke dị n'okpuru ebe a na-egosi na ịntanetị.
Marouane Fellaini maka eziokwu
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Ndụ mmekọrịta
Ndụ ịhụnanya nke Marouane Fellaini nwere mgbagwoju anya. Ọ bụ onye na-enwe ndụ dị ka otu nwoke. N'otu oge, Lara Binet bụ onye kachasị mkpa na ndụ Fellaini.
Fellaini na Miss Belgium Lara Binet na-agbanye aka na afọ ruo ọtụtụ afọ, ruo mgbe ha gbasiri ike na 2012.
Lara na Fellaini mebiri n'oge na-adịghị anya mgbe ọ bịarịrị aka maka ndị mmeri Premier League, ebe ndị ọzọ kwuru na ha lụrụ.
Binet jupụtara na Miss Liège na 2011. Ọ bụ a finalist na 2011 Miss Belgium ịma mma mara mma.
Fellaini nwere mmetụta dị iche na ndụ mmekọrịta ya kemgbe ọ kwagara Manchester United. N'okwu ya ...
'Mgbe na Everton, ndị inyom na-awagharị m, ' Fellaini kwuru. 'Ọ dị oke. Na Manchester, ndị mmadụ anaghị amata m nke ọma ma na-emeso m n'ụzọ dị ùgwù karị.
Na nso nso a, ya na Jeffers Roxanne nọ. Ya na Fellaini zutere enyi ya. Jeffers bụ enyi nwanyị enyi Ashley Cole. Ọ dị n'ime ya n'ihi na ọ na-eche na ntutu ya dị oke mma.
Fellaini na Jeffers Roxanne
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Ndụ Ezinụlọ
Marouane Fellaini si n'aka nna ya, bụ Abdellatif Fellaini, na-arụ ọrụ na-etiti. Nke a bụ tupu a kwụọ ụgwọ ụlọ football.
Nna ya, Abdellatif na-egwuri egwu na Moroccan mgbe ọ bụ onye na-elekọta mgbakọ Raja Casablanca na Hassania d'Agadir. Na 1972, ọ chọrọ ịgbanwe na Europe ma sonye KRC Mechelenz nke mbụ na ndị Belgium. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ Moroccan ya jụrụ ya ịkwaga Europe.
Kama ịlaghachi na Morocco, Abdellatif kwụsịrị ọrụ ọ na-arụ ọrụ, kwaga Europe ma ghọọ onye na-anya ụgbọ ala maka njem ụgbọ okporo ígwè Brussels. Taa ọ dị mpako inye ụmụ ya ohere ịmụ nwa ma tolite na Europe. Abdellatif na ụmụ ya nwere ezigbo mmekọrịta. O weghaara ezumike nká n'oge na-akwọ ụgbọ ala iji na-elekọta ọrụ Marouane.
Fellaini na nna-Abdellatif
Nne: Hafida Fellaini bụ nne nke Marouane Fellaini. N'ime mmekọahụ, anyị maara na ọ bụ onye na-abụghị eziokwu, ma ebe ịntanetị kpughere nwanyị dị n'okpuru bụ nne nke Marouane Fellaini. All ekele ya wig.
Fellaini si ụgha mum, Hafida Fellaini
Ụmụnna: Aha nwanne ya nwoke bụ Hamza Fellaini. Ọ bụkwa onye ọkachamara wig.
Hamza Fellaini (ese foto)
Mansour na Marouane nke a na-ese n'okpuru bụ ejima yiri. Ụmụ ejima abụọ ahụ na-ahụ maka ntutu isi ntutu isi.
Marouane Fellaini na ejima nwoke, Mansour.
Gị, ha dị ka anya, mana ọ bụghị elu ya. Marouane dị ogologo karịa Mansour.
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -The Image
N'otu oge, Marouane Fellaini ghọrọ ndị na-agba ọsọ ọhụrụ na-achọta onwe ya na-anwụghị anwụ dị ka otu ihe osise n'okporo ámá ... dị ka ọdịdị nke ihu ihu ya n'onwe ya.
Marouane Fellaini Piece Art - Ihu ihu
Ihe a merenụ mere mgbe onye Belgium na-egosi Red Devils n'oge mmeri Super Cup ha meriri ndị Real Madrid.
N'oge nsogbu ahụ, bọmbụ kụrụ Fellaini ihu n'ihu mgbe ọ na-aga maka nkụnye eji isi mee, ya na otu onye na-ese foto nwere ihe ọ pụtara bụ oge enwere ike wepụta ya ruo mgbe ebighị ebi. Ihe oyiyi nke Fellaini kpuchiri ihu, ọnụ na-eme ka ọ ghara inwe mmetụta site na mmetụta nke bọl ahụ, bụ ozugbo ọ kụrụ na mgbasa ozi.
Obere ngwa ngwa malitere ịrịa ọrịa, ọtụtụ ndị mmadụ dị elu na ndị ọkachamara na-agbarịta ụka na-ekwu banyere foto a. Mgbe agbasoro egwuregwu ahụ, Fellaini n'onwe ya gwara ya ngwa ngwa banyere onyinyo ahụ wee họrọ ịkọrọ ya site na akaụntụ onwe ya Instagram.
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Na-arụ ụka ngwa ngwa
Dịka Mesut Ozil, Fellaini kpebiri ma ọ bụ ngwa ngwa. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dịghị ebu ọnụ. Ị nwere ike ịchọta ịntanetị maka ndị ọzọ na-agba ụkwụ ndị Alakụba na-eji ejiji na-ekpe ekpere, ma ọ dịghị mgbe ọ bụla na Fellaini ọ bụ ezie na ọ bụ onye sitere n'okpukpe Alakụba bara ọgaranya nke Moroccan.
Ibu ọnụ n'oge Ramadan chọrọ ka ndị Alakụba na-aga n'enweghị ihe oriri na mmiri si n'Ọdịda Anyanwụ ruo mgbe anyanwụ dara. Fellaini chere na ọ nwere ike ịdị ize ndụ maka ya mgbe ọ na-egwu na ọnọdụ ụfọdụ dị ka nke Brazil na 2014 ụwa cup.
Ọtụtụ ndị na-adịghị mma nke obodo Muslim, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka na Valon Behrami nke Switzerland na Mesut Ozil Germany mgbe ọ mara ọkwa na ha ga-eme ka ha jiri ọnụ na-eme ka ha nwee ike ịkwaa ọnụ.
N'ebe ha na-agbachitere, onye isi oche nke Federation of Muslim Associations na Brazil, Ali Zogbhi kwuru:
Sayensị egosila na ọ bụrụ na ị na-emega ahụ n'emeghị gị nri, ị nwere nnukwu nsogbu. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ikwe ka ndị egwuregwu ghara ịdị ngwa ngwa n'oge a. "
Marouane Fellaini Ụmụaka Akụkọ Plus Ebube Eziokwu Ihe Akụkọ -Ụdị Zodiac
Marouane Fellaini bụ Sagittarius ma nwee àgwà ndị a na àgwà ya;
Ike Marouane Fellaini: Ịba ụba, ezigbo mma, ịkpa ọchị
Mmehie nke Marouane Fellaini: Nkwa ndị ọzọ kariri ike ịnapụta, enweghi ndidi, ga-ekwu ihe ọ bụla n'agbanyeghị agbanyeghị nchịkwa
Ihe Marouane Fellaini nwere mmasị: Nnwere onwe, njem, nkà ihe ọmụma, ịbụ n'èzí
Ihe Marouane Fellaini achọghị: Ndị na-eme ihe ike, na-egbochi ha, nkọwa ndị dị na mgbidi, nkọwa.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ anyị bụ Marouane Fellaini Child Story tinyere akụkọ eziokwu dị oke ọnụ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Nwere ike 22, 2018